I-rissagas phenomenon: ukuthi iyini nokuthi ivela kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umkhuba owaziwa ngegama le- i-rissagas Kungumcimbi owenzeka kwamanye ama-cove kanye namachweba eziQhingini zaseBalearic. Ingahunyushelwa olimini lwesiSpanish njenge-hangover. Kuyinto enesifiso sokufuna ukwazi equkethe ukukhishwa okuhlukahlukene olwandle okungafinyelela kumamitha ama-2 ububanzi ngezikhathi zemizuzu eyi-10 kuphela. Akuyona into eyenzeka kulesi siqhingi kuphela, kepha kuyiqiniso ukuthi kwenzeka kaningi.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, umonakalo nobuningi okwenzeka ngalo i-rissagas.
1 Yini ama-rissagas
2 Izimbangela ze-rissagas
4 Isikhathi esihlotshaniswa ne-rissagas
Leli gama ngenxa yesenzeko esenzeka ngemvamisa enkulu eziQhingini zaseBalearic. Yize kungeyona eyingqayizivele kule sayithi, iyenzeka ku itheku laseCiutadella edolobheni lesiqhingi saseMenorca.
Uma kwenzeka lesi simo siziveza njengokwehla okungazelelwe ezingeni lamanzi ethekwini. Ngokwehla okunjalo, lonke itheku cishe alinalutho ngemizuzu embalwa. Ngenxa yalokhu, izikebhe zabadobi zithinta ezansi kanti izinhlanzi eziningi zibulawa ukuminyana. Kodwa-ke, ezinye izindawo zetheku azinalutho ngokuphelele kepha ungabona ukwehla okukhulu ezingeni lamanzi. Lokhu kudala ukuthi izikebhe eziningi zibhajwe isikhashana.
Emizuzwini engemingaki kamuva, amanzi abuyela ethekwini futhi futhi lokhu kubangela ukuthi zonke izikebhe zikhase bese zishayisana. Ngaphezu kwalokho, izikebhe eziningi ziyacwila futhi zidale umonakalo omkhulu ngokujwayelekile. Kwezinye izikhathi sithola isigaxa samanzi ngokungazelelwe esidala izikhukhula ezithile ezindaweni eziseduze nechweba. Kule mikhuba yeqhwa esiyitholayo umphumela omkhulu ezimotweni nasemagcekeni asondele ethekwini.
Imvamisa le nto iphindaphindwa ngokujikeleza amahora amaningi. Kwesinye isikhathi ama-rissagas atholakale kaningana ngosuku olufanayo.
Njengoba kulindelwe, le nto iyamangaza impela futhi kwenziwa imizamo yokuthola isizathu semvelaphi yayo. Le nto yaziwa isikhathi esithile, ikakhulukazi evela eCiutadella. Kukhona ezinye izinkomba ezikhuluma ngokucwila kwemikhumbi ethekwini laseCiutadella ngekhulu le-XNUMX. Futhi ngukuthi wonke la mazinga anendawo enkulu engavamile futhi ivela esikhathini esifushane nje.
Ngokuvamile, kucatshangelwa ukuthi ukuphakama kwamagagasi asezinkanyezi aseMedithera kuvame ukuba namasentimitha angaba ngu-20 esikhathini samahora amaningana. Le yinto engabonakali ngamehlo. Noma kunjalo, i-rissagas ivela kuma-amplitudes angaphezu kwamamitha amabili ubude ubude besikhathi semizuzu eyi-2.
Imvelaphi ye-rissagas ibingakaziwa kuze kube yizikhathi zakamuva lapho kunolwazi oluningi ngemeteorology nokusebenza kwamagagasi. Kwakucatshangwa ukuthi imvelaphi ye-rissagas ingaba yinkanyezi. Lokhu kusho ukuthi inohlobo lokusebenza olufana nolwamagagasi. Kwakucatshangwa nokuthi kungaba nemvelaphi yokuzamazama komhlaba. Kungenzeka ngenxa yokuzamazama komhlaba ngaphansi kwamanzi okwenza amagagasi ahlukahlukene azokhuliswa afinyelele ethekwini. Noma kunjalo, yonke le micabango yayinamandla anele ukukwazi ukuchaza lo mkhuba ikakhulukazi. Okuncane okungachazwa kube yimvamisa echichima yalesi senzakalo kule nsimu ethile hhayi kwezinye.
Isizathu sangempela saziwa ngo-1934, ngemuva kwezifundo ezahlukahlukene ngokushintshashintsha okungavamile olwandle. Ucwaningo lukhombisa ukuthi imbangela ye-rissagas yasemkhathini. Ukuguquka okukhulu okungazelelwe olwandle kuhlotshaniswa nokunye ukuguquka okungazelelwe kwengcindezi yasemkhathini. Endabeni yeCiutadella in iziQhingi zeBalearic zikhiqizwa ngenxa yokuxhumana phakathi komkhathi nolwandle. Abanye ababhali bacabanga ngombono wokuthi i-rissaga ikhiqizwa yithonya lamaza adonsela phansi akhiqizwa emazingeni aphakathi kwetroposphere. La magagasi adonsela phansi ayenzeka ngenxa yokugunda komoya ngenxa yokushayisana kwengcindezi yasemkhathini ngaphezulu ezingeni lomhlaba.
Kunezimo ezahlukahlukene zomkhathi ezinesici esithe xaxa sokukhuthaza i-rissagas. Izimo zomkhathi ezintathu ezivumela ukuvela kwalesi simo yilezi ezilandelayo:
Kufanele kube nemimoya enamandla yaseningizimu entshonalanga emazingeni aphakathi naphezulu e-troposphere. Le mimoya kufanele ivuthe phambi komsele ojulile othinta iNhlonhlo Yase-Iberia.
Ngamazinga angaphansi kwamamitha ayi-1500 Kufanele kube khona isisindo somoya esezingeni eliphakeme esidala ukuba khona kokuguquguquka okuqinile kokushisa phakathi kwaleli zinga nomoya ongaphezulu kobuso bolwandle. Umoya ebusweni bolwandle uzobanda ngaphezu kwalokhu.
Kumele kube khona ukugeleza komoya entekenteke ebuthaka noma elinganiselayo ebusweni.
Lesi simo sokugcina uma usanda kuqinisekisa ukuthi akudingekile ngokuphelele ukuthi i-rissagas yenzeke. Ama-rissagas ake abonwa ngemimoya evela eningizimu noma eningizimu-ntshonalanga ebusweni. Ochwepheshe bezimo zezulu baseMedithera bafinyelele esiphethweni sokuthi lezi zimo zomkhathi ezinhle zerissagas zenzeka phakathi nengxenye efudumele yonyaka. Ngakho-ke, imvamisa ephakeme kakhulu yalesi senzakalo yenzeka phakathi kuka-Ephreli no-Okthoba.
Isikhathi esihlotshaniswa ne-rissagas
Esinye sezici ezibalulekile okufanele sibhekele ukubikezelwa kokuqapha i-rissagas yisimo sezulu sasemkhathini esiveza lezi zimo. Ezinsukwini ku lezo ezikhiqiza i-rissagas isibhakabhaka zivame ukumbozwa izingqimba zama-altare aminyene naka-opaque. Imvamisa kuyaqabukela ukuthi kube khona amafu ngezansi, kepha kuyisici esibhakabhakeni esinamafu futhi esiphuzi ngenxa yomusi. Imvula ibonakala ngothuli olungena kuleli zwekazi lase-Afrika.
Kwesinye isikhathi kunamafu ambalwa ahlakazekile angakhombisi ukunyakaza okuqonde mpo nakho.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesimo se-rissagas.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » URissagas